Xinhua Myanmar - ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလ မှ မေလအတွင်း ကုန်သွယ်မှု လိုငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၁ဝဝ၈.၄၂ သန်း ရှိခဲ့
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလ မှ မေလအတွင်း ကုန်သွယ်မှု လိုငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၁ဝဝ၈.၄၂ သန်း ရှိခဲ့
သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းရှိ ကုန်တင်သဘောင်္ တစ်စင်းအား တွေ့ ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Local
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလ မှ မေလအတွင်း စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာ ၄၉၄၃ . ၂၄ သန်း ဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှု လိုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဝဝ၈.၄၂ သန်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ဗဟို စာရင်းအင်း အဖွဲ့မှ လစဉ်တင်ပြသော ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် အခြေအနေ အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
ဧပြီလမှ မေလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန် တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉၆၇.၄၁ သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပြီး သွင်းကုန်တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉၇၅. ၈၃ သန်း ဖြစ်သဖြင့် စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာ ၄၉၄၃ . ၂၄ သန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။ထို့ အတူ မေလအတွက် စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉၆၃. ၉၁ သန်း ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှု လိုငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၅၄. ၇၇ သန်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Previous Article ပြည်သူများအား အသိပညာပေးနိုင်မည့် လူမှုအခြေပြု ဗဟိုဌာနများ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် များရှိ ၁၈ နေရာတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် လျာထား
Next Article မြန်မာနိုင်ငံတွင် Digital Economy အောင်မြင်စွာ ပေါ်ထွန်းရေး အစိုးရ ပံ့ပိုးမည်